Ityotyombe lethu eliNcinci eliMnyama eliGlamping elinomahluko
Ukubaleka kwezothando kwababini, kubekwe phambi kolwandle kunye nejethi yakho yabucala yokuqhayisa ngeHeir Island kunye neBeacon eBaltimore kumgama. Ityotyombe lethu eliNcinci eliMnyama yeyona ndlela yokubalekela izibini okanye abantu abangabodwa bekhangela ubomi obuhlaziyayo bendalo. Ukunqongophala kwe-Wi-Fi, iTV kunye nombane kukubuyisele kwindalo. Zikhulule uye kwikhefu lonxweme kunye nomahluko. Uya kubuyela ekhaya kwakhona umoya kwiiseyile zakho ubuyiselwe ngokupheleleyo.
Ifakwe kwimizuzu eyi-15 ukusuka eSkibbereen naseBallydehob.
Ityotyombe liyilwe lanomxholo we-nautical ngokuhambelana nendawo elingqongileyo.
Iqukethe iikhabhini ezimbini, enye enegumbi lakho lokuhlambela labucala elinendlu yangasese kunye nesitya kunye neshawari enegesi enembono. Ikhabhathi yesibini inebhedi ephindwe kabini, ikhitshi kunye nesitovu esibaswe ngegesi. Unokupheka kwi-2 ring gas burner nge-grill okanye kwi-BBQ yangaphandle. Ibhokisi epholileyo yeentsuku ezi-5 enomkhenkce inikezelwa ukugcina zonke izinto zakho ezibalulekileyo zibanda. Iiphaneli zelanga zibonelela ngokukhanya kunye namandla aneleyo okuhlawula ifowuni ephathwayo.
Ityotyombe lethu eliNcinci eliMnyama libonelela ngendawo yokuzola kunye nokungasese kude nokungxama kobomi kwaye ngokwenene yindawo ekhethekileyo elungele abathandi bendalo.
Sihlala kumgama oziikhilomitha ezi-2 ukuze sifumaneke ngemizuzu ngayo nantoni na onokuyifuna.